China Industrial Soap Dispenser Pump Custom Plastic Screw Up Lotion Pump Ho an'ny Fanasana tanana Manufacturing and Factory | Yongxiang
Paompy fanasan-tanana vita amin'ny plastika vita amin'ny savony indostrialy
Anaran'ny vokatra: Screw Lotion Pump
Anaran'ny marika:YuYao Chenfei
Laharana modely: CY102-2
Habe: 24/410 28/410
Famaranana: Aluminum Ribber Smooth
halavan'ny fantsona: Tube namboarina
Famoahana tahan'ny: 1.6-2.0ml/T
Ohatra: omena maimaimpoana
Fampiasana: miaraka amin'ny tavoahangy plastika na tavoahangy fitaratra ho an'ny lotion dispenser
Fampiharana: Ampiasaina amin'ny fanasan-tanana ranon-javatra, savony ranon-javatra, shampoo, conditioner volo, douche gel, sns.
Yuyao Chenfei — Mpanamboatra matihanina miasa amin'ny famenoana mifanaraka amin'ny salon hatsaran-tarehy, fanafody ary vokatra fanasan-damba
Ireo paompy lotion ireo dia natao ho an'ny tavoahangy paompy fanosotra na dispenser ary misy loko isan-karazany. Izy ireo dia tonga lafatra ho an'ny fitaovana viscous, toy ny lotions, savony sy shampoos, ary koa ny fanafody, kosmetika, ary vokatra ara-pahasalamana sy hatsaran-tarehy hafa.
Tena tsara ho an'ny fitaovana viscous
Ny paompy 24/410 dia mety tsy mifanaraka amin'ny tenda rehetra
Mamoaka 2mL isaky ny tsipìka
Plunger mihidy ho an'ny fandefasana sy fitahirizana
Ny paompy fanosotra polypropylène dia manana slot mihidy ao anatin'ny satrony ary alefa any aminao ao amin'ny toerana mihidy, vonona ny hapetraka mivantana amin'ny fitoeranao. Ny paompy lotion dia mamela ny vokatra avo lenta, toy ny lotions sy savony ranoka, mba ho mora entina. Ny paompy fanosotra dia azo ampiasaina amin'ny fitaratra, plastika, na metaly, ary manaparitaka tsara ny vokatra 0,5 ml isaky ny kapoka. Ny paompy lotion dia azo alaina aminao amin'ny haben'ny kapila 24/410 miaraka amin'ny halavan'ny fantsona dip isan-karazany.
Ny Lotion Pumps dia manome viscosity sy fahaiza-manao manokana ho an'ny vokatra maromaro ao anatin'izany ny crème, tonika, fikarakarana volo, savony rano ary, mazava ho azy, lotions. Ny paompy lotion dia azo alaina amin'ny 1.2cc ka hatramin'ny 30cc mahazatra, ao anatin'izany ny fisafidianana paompy izay miaro ny vokatra amin'ny fidiran'ny rano. Ny paompy lotion dia nampiasaina tamin'ny fikarakarana volo, fikarakarana manokana, fikarakarana biby fiompy, fiara ary indostrian'ny fikarakarana trano.
1: Fandefasana haingana, noho ny automatique ny fitaovana, ny fatran'ny fahafaha-manao, ny fandefasana haingana.
2: kalitao tsara, fanaraha-maso ny sampana fanaraha-maso kalitao matanjaka, mba hahazoana antoka ny kalitao
3: vidiny mirary, orinasa famokarana mizana, famokarana automatique, mampihena be ny vidin'ny famokarana, mba hiantohana ny vidin'ny vokatra.
4: Ny paompy lotion dia tarihina sy araha-maso eo ambanin'ny ISO9001. Akora manta fiarovana ny tontolo iainana mangarahara avo, mateza, marefo ary kabinetra.
teo aloha: Ankavia-Ankavanana Lock Lotion Pump Vidin'ny orinasa 28/400 28/410 28/415 Plastic Lotion Pump savony fanasan-tànana Fanasan-tanana Dispenser satroka paompy
Manaraka: 18/410 20/410 24/410 360 Degree Spray Nozzle Ditin-kazo manitra Atomizer plastika tsara zavona sprayer amin'ny dustcap mazava ho an'ny tavoahangy kosmetika
Big Lotion Pump
Tavoahangy Lotion fitaratra misy paompy
Havia havanana Lock Lotion Pump
Long Nozzle Lotion Dispenser Pump
Tavoahangy Lotion misy paompy
Paompy fanosotra 28/410
Lotion paompy tavoahangy
Dispenser paompy lotion
Tavoahangy plastika misy paompy lotion
Lotion tavoahangy paompy
Tavoahangy Lotion Paompy
Manaova paompy Lotion
Havia-Ankavanana Lock Lotion Pump Vidin'ny orinasa 28/40...